Fiarahamonim-pirenena: tokony hivoaka iray volana mialoha ny LFR | NewsMada
Amin’ny 4 jolay 2021 ny fotoana hikatonan’ny fivorian’ny Antenimierampirenena, nefa mbola tsy mivoaka ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana hasiam-panitsiana (LFR) 2021. Nasian’ny fiarahamonim-pirenena (Msistatao, CCOC, CIvorary) fanamarihana izany, satria tratra aoriana foana ny fametrahana io LFR io ka tsy ahafahan’ny olom-pirenena mahafantatra sy mamakafaka izany.
Ahoana moa ny hananana fotoana ampy hamakafakana izany LFR izany ho an’ny tombontsoam-bahoaka ? Raha ny marina, tokony ho iray volana mialoha ny hifaranan’ny fotoam-pivorian’ny Antenimiera ny hivoahany, raha tsy izany, tsy ampy ny fotoana ka izay sitrapon’ny fahefana mpanatanteraka ihany no misongadina ho lanian’ny depiote sy ny loholona maro anisa. Tiana ho hita tsara ny fampiasana ny vola, inona marina ny laharam-pahamehana ? Tsy hoe fitiavana te hanakiana, hoy ny fiarahamonim-pirenena, fa hajao ny lalàna. Na ariary iray ampiasana aza, tokony hazava.
Nomarihin’ny ao amin’ny fiarahamonim-pirenena ihany fa amin’izao, misy depiote miteny hoe tonga eo am-pelatanany ny LFR, ny sasany kosa milaza mifanohitra amin’izay, hoe tsy mbola tonga any aminy. Raha mipetraka marina izay LFR izay maninona mbola tsy hita any amin’ny tranonkalan’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibola ?